प्रदेश ५ मा नौ सय बढी उद्योग
विकाश पराजुली बुटवल, २१ साउन
प्रदेश ५ मा ठूला लगानीका उद्योग थपिने क्रम बढेको छ । कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादन निर्यात सहज भएकाले सीमा जोडिएका जिल्लामा उद्योग खुल्ने क्रम बढेको हो । पश्चिम नवलपरासीदेखि नेपालगन्जसम्म उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश वस्तुस्थिति विवरणअनुसार प्रदेश ५ मा ९ सय बढी उद्योग छन् । तीमध्ये १ सय ७८ वटा विदेशी लगानीका उद्योग छन् । विदेशी लगानीमा १ सय १० साना, ३९ मझौला र २९ ठूला उद्योग छन् ।
ती उद्योगमा १३ अर्ब ६३ करोडको लगानी रहेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४\_७५ मा मात्रै प्रदेशमा ५३ वटा ठूला उद्योग थपिएका छन् । ती उद्योगमा ३३ अर्ब ८५ करोड २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ लगानी भएको विवरणमा उल्लेख छ ।  प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी नवलपरासी पश्चिम र रूपन्देहीमा छ । यहाँका उद्योगमा भारत, चीन, जापान, अमेरिका, डेनमार्कलगायतका देशले लगानी गरेका छन् ।
यस्तै, प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा ठूला उद्योग ३ सय २० वटा छन् । २०७० साल अघिसम्म भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोर र भैरहवा–बुटवल सडक खण्डको दाँयाबाँया उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षक मानिन्थ्यो । तर, भैरहवा–बुटवल छेउछाउमा उद्योग खोल्न पर्याप्त जमिन नहुँदा र भैरहवा–लुम्बिनी खण्डमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले स्वीकृति नदिँदा भैरहवा–परासी क्षेत्र उद्योगीको मुख्य रोजाइमा छ ।
त्यसैगरी, बाँकेमा १ सय ८५ र कपिलवस्तुमा १ सय १० ठूला उद्योग छन् । पहाडी जिल्लाहरुमा सबैभन्दा कम रोल्पामा एउटा मात्र उद्योग छ । त्यस्तै, प्युठानमा ३ वटा र गुल्मीमा ८ वटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले जानकारी दिए । त्यसैगरी, दाङमा ७८ वटा उद्योग छन् । बर्दिया, दाङ, नवलपरासी पश्चिम औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढेका छन् । दाङ र रूपन्देही सिमेन्ट हबका रूपमा विकास भएका छन् । भारतसँगको आयात निर्यातका लागि सहज र नजिकको दूरी भएको प्रदेश भएकाले उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको उद्योगीको भनाइ छ ।
देशका क्लिंकर आयात गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ३६ मध्ये प्रदेश ५ मा २१ उद्योग छन् । जसमध्ये रुपन्देहीमा मात्र ११ वटा उद्योग छन् । त्यसैगरी, स्टिल, प्लाइउड, चाउचाउ, पेपर, फ्लाबरलगायतका ठूला उद्योगमा खर्बाैंको लगानी भएको छ ।
यहाँ स्थापित उद्योगले २ अर्बदेखि ८ अर्बसम्म लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय स्थापना भएको अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्र हालसम्म ८ अर्ब माथि लगानी भएको बताइएको छ । त्यसैगरी, अम्बे र गोयन्का स्टिल्सले ५\_५ अर्बभन्दा माथि लगानी गरेका छन् ।
वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि प्लान्ट र लगानी बढाउँदै लगेका छन् । रुपन्देहीमा ठूला मात्र नभई साना तथा मझौला उद्योगहरूको संख्या पनि धेरै छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार यहाँ १२ हजार उद्योग दर्ता भएका छन् भने २० अर्ब बढी लगानी छ ।
किन बढ्यो उद्योगमा लगानी ?
प्रदेश ५ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले अरु प्रदेशमा भन्दा प्रदेश ५ मा उद्योगहरुको बढी सुरक्षा भएका कारणले उद्योगीको आकर्षण प्रदेश ५ मा भएको बताउँछन् । त्योबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारणले पनि पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढेको उनको भनाइ थियो ।
‘कुनै समय घर, घडेरीमा मात्र लगानी गर्ने प्रचलन थियो र तर अहिले घर जग्गामा भएको लगानीसमेत उद्योग क्षेत्रमा गएका कारणले पनि उद्योगमा लगानी बढेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनले सरकारको नीतिले पनि उद्योगमा लगानीको प्रभाव देखिएको बताए । विदेशमा गएका युवाहरु नेपालमै उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै त्यस्ता उद्योगीलाई सरकारले नीतिगत रुपमा प्रोत्साहन गरेका कारणले पनि उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको उनको दाबी छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश ५ का संयोजक एजाज आलम नाकाबन्दीको समयमा देशका अरू नाका बन्द हुँदासमेत रुपन्देहीको बेलहिया नाका पुनः सञ्चालन भएकोले यो क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि सुरक्षित भएको बताए ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारी भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएकै कारण रुपन्देहीमा उद्योगप्रति लगानी बढ्दै गएको बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०७६, ००:५५:००